Apple dia manome ny beta 7 an'ny macOS Sierra ho an'ny mpamorona sy mpampiasa | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manome ny macOS Sierra beta 7 ho an'ny mpamorona sy mpampiasa
Ny beta fahafito ho an'ny mpamorona sy mpampiasa nisoratra anarana tao amin'ny programa beta ho an'ny daholobe Navoaka ny macOS Sierra 10.12. Ny marina dia natomboka omaly alina izy ary tamin'ny voalohany ny vaovao izay entin'ity beta vaovao ity dia mifandraika amin'ny fanatsarana ny rafitra amin'ny lafiny fitoniana sy fahombiazana, ankoatry ny famahana ireo lesoka mahazatra. Miatrika herinandro vitsivitsy amin'ny famoahana izahay raha ny momba ny kinova beta ary izany dia azo atao manondro fotsiny fa mikasa ny handefa ny kinova farany tsy ho ela i Apple, angamba amin'ny volana septambra dia hanana ny kinova farany.
Ny kinova rehetra izay navotsotra mandraka ankehitriny na ho an'ny developer na ny mpampiasa izay nametraka ny kinova ampahibemaso dia tena milamina sy miasa efa ho 100% raha ny vaovao ampidiriny ao amin'ny macOS Sierra. Na ahoana na ahoana, raha tsy miasa 100% izy io dia vokatry ny lesoka kely na satria tsy manana Apple Watch ny mpampiasa hahafahany mampiasa ny famafana Mac amin'ny famataranandro. Na izany na tsy izany dia tena akaiky ny mahita kinova farany sy ofisialy ho an'ny mpampiasa rehetra izahay.
Ny fananganana an'ity beta vaovao ity dia 16A304a ary ny mpampiasa rehetra izay nametraka kinova taloha dia efa manana ny fanavaozana azo alaina ao amin'ny Mac App Store. Izahay dia milaza hatrany fa tsara kokoa ny mampiasa an'ireny beta ireny amin'ny fisaratsarahana ivelany hisorohana olana, fa ny tena marina dia mandeha tsara amin'ny ankapobeny sy ny mpampiasa sasany dia milaza amintsika fa efa nampiasa beta hatramin'ny voalohany izy ireo ary "zero problem". Na eo aza izany dia mitandrina hatrany ny tolo-kevitra, betas izy ireo ary mety misy bibikely na tsy mifanaraka amin'ny rindrambaiko miasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Apple dia manome ny macOS Sierra beta 7 ho an'ny mpamorona sy mpampiasa
Tekserve dia namidy ny fanangonana ny Macintosh 35 amidy
Patanty vaovao eo imasony: Zava-misy mitombo eto tonga isika!